मेस्सी र अर्जेन्टिनामाथि जितको दबाब, क्रोएसियाविरुद्ध चम्केलान् मेस्सी ? « Bikas Times
मेस्सी र अर्जेन्टिनामाथि जितको दबाब, क्रोएसियाविरुद्ध चम्केलान् मेस्सी ?
निज्ने नोभगोरोड : लियोनल मेस्सीले विश्वकप फुटबलको उपाधि जित्ने समयले बिस्तारै नेटो काट्दै छ । विश्वकप त्यही उपाधि हो जसले मेस्सीलाई विश्वकै सर्वकालीन महान् खेलाडीको दर्जामा उभ्याउन सक्छ । यही आइतबार बार्सिलोनाका फरवार्ड मेसीले ३१ वर्षमा पाइला टेक्दै छन् । त्यसको अर्थ हो, रूस विश्वकप सम्भवतः मेस्सीका लागि उपाधि उचाल्ने अन्तिम मौका बन्न सक्छ ।
त्यसैले पनि समूह ‘डी’ अन्तर्गत बिहीबार क्रोएसियाविरुद्धको खेलले मेस्सीको जीवनमा विशेष महत्व राख्नेछ । मेस्सी मात्र होइन अर्जेन्टिनाका लागि पनि । मेस्सीले क्लबबाट ४ वटा च्याम्पियन्स लिग, ९ वटा स्पेनिस ला लिगाको उपाधि जितिसकेका छन् । तर, जन्मभूमि अर्जेन्टिनालाई उनले ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि जिताउन सकेका छैनन् ।
विश्वकपको पहिलो खेलमा मेस्सीले पेनाल्टी गुमाउँदा आइसल्यान्डसँग १–१ को बराबरीमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । नव प्रवेशी आइसल्यान्डसँगको बराबरीले अर्जेन्टिनाको अघिल्लो चरण प्रवेश पुग्ने बाटो साँघुरो बन्यो । अब त्यसलाई फराकिलो बनाउनका लागि मेस्सीको टोलीले बिहीबार क्रोएसियालाई हराउनुपर्नेछ ।
क्रोएसियाले नाइजेरियालाई २–० को नतिजामा हराउँदै तीन अंक जोडेको छ । त्यसैले निज्ने नोभगोरोडमा हुने अर्जेन्टिनाविरुद्धको खेलमा क्रोएसिया तुलनात्मक रूपमा कम दबाबमा हुनेछ । अर्जेन्टिनाको प्रशिक्षण सम्हालेपछि जर्ज साम्पोलीले एउटा खेलमा उतारेको पहिलो रोजाइलाई अर्को खेलमा दोहोर्याएका छैनन् । पुनः एक पटक उनले बोका जुनियर्सका फरवार्ड क्रिस्टियन पाभोनलाई मेस्सीसँगै आक्रमणको जिम्मेवारी दिन सक्छन्।
छरितो स्वभावका पाभोन दायाँ र बायाँ दुवै भागबाट खेल्न सक्छन् । उनले पिएसजीका एन्जेल डी मारियालाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना छ । यसअघिका प्रशिक्षकले जस्तै साम्पोलीले पनि मेसीका लागि सुहाउँदो जोडी खोजिरहेका थिए । फुटबलका महान् हस्ती डिएगो म्याराडोना (१९८६ मा अर्जेन्टिनालाई उपाधि जिताएका)सँग तुलना गरिने मेस्सीले प्राय एकल प्रयासमा टोलीलाई अघि बढाउँदै आएका छन् ।
‘मलाई लाग्छ साम्पोलीले हरेक पोजिसनका लागि खेलाडी हेरिरहेका छन् । उनले त्यो दिन के निर्णय लिन्छन् भनेर हामी कुरिरहेका छौं,’ पाभोनले भने, ‘मैले मौका पाउने विश्वास गरेको छु र भाग्यवश मेरा लागि सबै कुरा राम्रा भइरहेका छन् । तर म सुरुआती टोलीमा पर्छु भनेर मलाई अझै थाहा छैन ।’
सुन्दा अपत्यारिलो लाग्छ सक्छ । तर, अर्जेन्टिनाले २५ वर्षअघि १९९३ मा कोपा अमेरिकाको उपाधि जितेपछि ठूला प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सकेको छैन । दुई पटकको विश्वकप विजेता अर्जेन्टिनाले चार वर्षअघि ब्राजिलमा सम्पन्न विश्वकपको फाइनल खेलेको थियो । थपिएको समयमा जर्मनीसँग १–० ले पराजित भएको अर्जेन्टिनाले २०१५ र २०१६ को फाइनलमा चिलीलाई नतिजा सुम्पिएको थियो । ३ वटा फाइनलमा अभागी बनेका मेस्सी अर्जेन्टिनालाई अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि दिलाउने अवसरबाट चुकेका थिए ।
अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक साम्पोलीले बिहीबार रक्षक मार्कोस रोहोको स्थानमा मार्काडालाई खेलाउने बताइएको छ । त्यस्तै आइसल्यान्डसँगको खेलमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्न नसकेका मिडफिल्डर लुकास बिगलियाको स्थानमा मार्कुस अक्युनालाई पहिलो रोजाइमा खेलाउने सम्भावना छ ।
अष्ट्रेलियामा बिचल्ली परेका नेपाली विद्यार्थीको उद्धार गर्न कांग्रेसको आग्रह
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अध्ययन गर्न अष्ट्रेलिया गएर बिचल्लीमा परेका एक हजारभन्दा बढी नेपाली